आज शुक्रवार सुप्पा देउरालीको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस ! - समृद्ध नेपाल
मेष अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। बुद्धिको उपयोगले चिताएको योजना पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। बोलीको माध्यमले धेरैलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा समेत मनग्गे फाइदा हुनेछ।
वृष बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ।
मिथुन छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। घरखर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। बनिसकेको काम पनि दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। बलजफ्तीले व्यर्थैमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउनेछ।
कर्कट चुनाैतीपूर्ण काम सम्पादन गरेर पनि धन आर्जन गर्न सकिनेछ। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। खर्च बढ्नाले अर्थअभाव देखिए पनि आवश्यक पर्दा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपरे पनि रोकिएका काम बन्नेछन्। पछिका लागि लगानी बढाउने समय छ। मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ।
सिंह प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ।
कन्या अवसर र चुनौती एकसाथ देखा पर्ने हुँदा होसियारीसाथ काममा जुट्नुपर्ला। छिद्र खोतल्नेहरूले दु:ख दिनेछन्, विशेष योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। सामाजिक जिम्मेवारी बढ्नेछ। तर अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको साथ–सहयोगले मात्र अप्ठ्यारा चुनौती पार लगाउन सफल भइनेछ।
तुला बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समयमा गम्भीर नबन्दा पछि दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। बाध्यात्मक परिस्थितिले अप्ठ्याराेमा परिएला। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्न सक्छ। अरूका काममा अमूल्य समय खर्चनुपर्ला।
वृश्चिक व्यापारमा लाभ लिने समय छ। व्यवसायले रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर दिलाउन सक्छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्ने समय छ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त होला। गृहस्थी यात्रा रमाइलो रहनेछ। आफन्तहरूको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ।
धनु वैधानिक प्रावधानले काममा समस्या पर्नेछ। अधिकार जोगाउन केही चुनौती सामना गर्नुपर्ला। तापनि, भौतिक साधन जुट्नुका साथै दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। बल तथा बुद्धिको उपयोगले चुनौती पन्छाउन सफल भइनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ।
मकर अवसरका साथै चुनौतीसमेत देखा पर्ने समय छ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। चिताएको काममा मेसो नमिल्दा योजना पूरा नहुन सक्छ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। स्वास्थ्य- समस्याले अध्ययनमा बाधा हुनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। नयाँ काम थाल्न शुभचिन्तकहरूले मात्र साथ दिनेछन्।
कुम्भ अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला। समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउनेछन्। उपलब्धि हासिल गर्न केही समय लाग्नेछ।
मीन सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। पुरुषार्थद्वारा उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। विशेष उपहार हातलागी होला। प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ
सुत्ने बेलामा सुप्पा देउरालीको दर्सन गरि भोलि चैत्र १७ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस !
आजको तपाईंको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल
तपाइको कात्तिक २७ बुधबारको राशिफल ! पाथिभरा माताको समानको लागि एक शेयर गर्नु होला
आज शनिवार हलेसी महादेवको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस !
नया बर्ष वैशाख २०७८ राशिफल अनुसार कस्तो रहनेछ तपाइको मासिक राशिफल पढ्नुहोस !
तपाइको कार्तिक २३ गते देखी कार्तिक २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् !
आज बुधवार बाराहा क्षेत्रको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस !
आज वि.सं. २०७७ साउन १५ बिहीवारको पढ्नुहोस तपाइको राशिफल !
तपाइको आज २०७६ कार्तिक १४ गते विहीबारको राशिफल
आज सोमवार हलेसी महादेवको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस !
तपाइको साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस ! वैशाख ५—११ सम्म
आज २०७७ पुस ८ गते, बुधवार पाथिभरा मतको दर्सन गरि राशिफल पढ्नुहोस !
आज बिहीवार बाराहा क्षेत्रको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस !
दक्षिणकाली माताको दर्सन गरौ पुण्य कमाउ !